डिप्रेसन छ ? खुल्न नहिच्किचाउनुस् - Samudrapari.com
डिप्रेसन छ ? खुल्न नहिच्किचाउनुस्
काठमाडौं – डिप्रेसन एक मानसिक समस्या हो । समाजमा डिप्रेसनलाई ठूलो रोगका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले पनि मानिस यसबारे खुलेर कुरा गर्न हिच्किचाउँछन् । तर, यो समस्या सामान्य रूपमा धेरै मानिसमा हुन सक्छ । त्यसैले डिप्रेसनको शंका भएमा खुल्न आवश्यक हुन्छ । यसको उपचार सम्भव छ । तर, सही समयमा उपचार भएन भने ठूलो दुर्घटना पनि निम्तन सक्छ ।
डिप्रेसन विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । डिप्रेसन सुरुको अवस्थामा छ भने विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शबाट नै उपचार सम्भव हुन्छ । यदि डिप्रेसन जटिल अवस्थामा पुगेको छ भने यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसपछि डिप्रेसनको अवस्था हेरेर औषधि सेवन गर्न आवश्यक हुन्छ । डिप्रेसनको औषधिले केही मात्रामा साइडइफेक्ट पनि हुन सक्छ । उक्त साइडइफेक्टबाट डराउनुपर्ने कारणचाहिँ छैन ।
निराशापन, अत्यधिक थकान महसुस, आत्मविश्वासमा कमी डिप्रेसनका प्रमुख लक्षण हुन् । यसका साथै डिप्रेसन हुने मानिसलाई नरमाइलो लाग्ने, दिक्क लाग्ने, निद्रा र खानामा गडबडी, कसैसँग बोल्न मन नलाग्नेलगायतका लक्षण देखिन्छ । अरूसँग बोल्न मन नलाग्ने, अल्छी लाग्ने, इच्छाशक्तिमा कमी आउने, आफूलाई दोषारोपण गर्ने, आत्महत्याको सोच पलाउने पनि डिप्रेसनका लक्षण हुन् ।
दीर्घ रोगीहरूलाई डिप्रेसनको जोखिम हुन सक्छ । क्यान्सर, थाइराइड, मुटुसम्बन्धी समस्या हुनेलाई डिप्रेसनको जोखिम बढी हुन्छ ।
टाउकोमा चोट लागेका, छारेरोगबाट ग्रसित मानिसलाई डिप्रेसनले छुन सक्छ ।